Speaking Archives - Learning English Myanmar
နေ့စဉ်သုံး လျှပ်တစ်ပြက် အင်္ဂလိပ်ဝါကျတိုများ
Mar 18, 2019 | Speaking
Don’t sit near me! = ငါ့နား လာမထိုင်နဲ့။Don’t sit up late! = အိပ်ရေးပျက်မခံပါနဲ့။Don’t sit idle! အလကား ထိုင်မနေနဲ့။Don’t sleep too much! = အကြာကြီး မအိပ်နဲ့။Don’t smoke. = ဆေးလိပ် မသောက်နဲ့နော်။Don’t snatch it! = ဇိုးကနဲ ဇတ်ကနဲ...
ဘယ်သူလဲလို့မေးတဲ့အခါ/ ဘယ်တော့/ ဘယ်တုန်းကလဲ သိချင်တဲ့အခါ ပြောတဲ့အသုံးများ
Mar 14, 2019 | Skills, Speaking
Who is it? ဒါဘယ်သူလဲ။ It is myfriend. ဒါကျွန်တော်သူငယ်ချင်းပါ။ Who are you? ခင်ဗျားဘယ်သူလဲ။ I’m Min Min. ကျွန်တော်မင်းမင်းပါ။ Who has work permit? ဘယ်သူမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်ရှိသလဲ။ We all have. ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာရှိပါတယ်။ This is for whom?...
Mar 13, 2019 | Skills, Speaking
Can you speak English?=အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်လား။ Yes,I can=ဟုတ်ကဲ့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ What’s your name?=နာမည် ဘယ်သူလဲ။ My name is Zaw Zaw.=ကျွန်တော်နာမည် ဇော်ဇော်ပါ။ What’s your nationality?=ဘယ်နိုင်ငံသားလဲ။ I’m Myanmar nationality.=ကျွန်တော် မြန်မာနိုင်ငံသားပါ။ What’s...